Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Ndị kọrịnt 12:1-31
Onyinye dị iche iche Chineke na-enye (1-11)
E nwere ọtụtụ ihe dị n’ahụ́ (12-31)
12 Ụmụnna m, achọrọ m ka unu mara nke a na-akọ gbasara onyinye dị iche iche Chineke na-enye.+ 2 Unu ma na tupu unu aghọọ ndị na-eso ụzọ Jizọs,* e duhiere unu, unu ana-efe arụsị dị iche iche na-anaghị ekwu okwu,+ ha eduru unu na-aga ebe ọ bụla dị ha mma. 3 Ma, achọrọ m ka unu mara na o nweghị onye mmụọ Chineke na-edu na-asị: “A bụrụ Jizọs ọnụ.” O nweghịkwa onye nwere ike ịsị: “Jizọs bụ Onyenwe anyị,” ọ gwụkwala ma mmụọ nsọ ọ̀ na-edu ya.+ 4 E nwere onyinye dị iche iche, ma, ọ bụ mmụọ nsọ na-eme ka mmadụ nwee nke ọ bụla.+ 5 E nwekwara ozi dị iche iche a na-eje iji nyere ndị ọzọ aka,+ ma, ha niile bụ maka otu Onyenwe anyị. 6 E nwere ọtụtụ ụzọ Chineke si eji ndị mmadụ arụ ọrụ dị iche iche, ma, ọ bụ otu Chineke na-eme ka ha na-arụ ha niile.+ 7 Ma, a na-ahụ otú mmụọ nsọ si enyere onye ọ bụla aka, ọ bụkwa Chineke na-enye mmụọ nsọ ka ọ baara mmadụ niile uru.+ 8 Mmụọ nsọ na-enyere otu onye aka iji amamihe ekwu okwu, otu mmụọ nsọ a na-enyekwara onye ọzọ aka ikwu ihe ndị ọzọ na-amaghị. 9 Mmụọ nsọ a na-eme ka otu onye nwee okwukwe,+ na-emekwa ka onye ọzọ nwee ike ịna-agwọ ọrịa.+ 10 Ọ na-enyere onye ọzọ aka ịrụ ọrụ ebube,+ na-eme ka onye ọzọ na-ebu amụma, na-enyere onye ọzọ aka ịghọta ma ihe e kwuru ò si n’ike mmụọ nsọ ka ọ̀ bụ na o sighị,+ na-eme ka onye ọzọ na-asụ asụsụ dị iche iche,+ na-enyekwara onye ọzọ aka ịsụgharị asụsụ dị iche iche.+ 11 Ma ihe ndị a niile ka otu mmụọ nsọ ahụ na-eme ka ndị mmadụ mee. Ọ na-enye onye ọ bụla ike ime ihe ọ bụla Chineke chọrọ ka o mee. 12 E nwere ọtụtụ ihe dị n’ahụ́. N’agbanyeghị na e nwere ọtụtụ ihe dị n’ahụ́, ọ bụ otu ahụ́.+ Otú ahụkwa ka ahụ́ Kraịst dị. 13 E ji otu mmụọ nsọ mee anyị niile baptizim, anyị abụrụ otu ahụ́, ma ànyị bụ ndị Juu ma ànyị bụ ndị Grik, ma ànyị bụ ndị ohu ma ànyị bụ ndị nweere onwe ha. Anyị niile nwekwara otu mmụọ nsọ. 14 N’eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe dị n’ahụ́, ọ bụghị otu ihe.+ 15 Ọ bụrụ na ụkwụ asị, “Ebe m na-abụghị aka, esoghị m n’ahụ́,” ọ gaghị eme ka ọ ghara iso n’ahụ́. 16 Ọ bụrụkwa na ntị asị, “Ebe m na-abụghị anya, esoghị m n’ahụ́,” ọ gaghị eme ka ọ ghara iso n’ahụ́. 17 Ọ bụrụ na ahụ́ niile bụ anya, olee ihe a ga-eji na-anụ ihe? Ọ bụrụ na ahụ́ niile bụ ntị, olee ihe a ga-eji na-anụ ísì ihe? 18 Ma, Chineke tinyere ihe ọ bụla dị n’ahụ́ otú ọ chọrọ. 19 A sị na ihe niile dị n’ahụ́ bụ otu ihe, olee otú ahụ́ gaara adị? 20 Ma, e nwere ọtụtụ ihe dị n’ahụ́, ma, ha niile bụ otu ahụ́. 21 Anya enweghị ike ịgwa aka, sị, “O nweghị ihe m ji gị eme.” Isi enweghịkwa ike ịgwa ụkwụ, sị, “O nweghị ihe m ji gị eme.” 22 Ma, ihe ndị dị n’ahụ́, ndị anyị na-ewere na ha abaghị uru, bakwara uru nke ha. 23 Ihe ndị dị n’ahụ́, ndị anyị chere na ha adịchaghị mma n’anya, ka anyị na-ekpuchi nke ọma.+ Ọ bụkwa ndị nke na-eme anyị ihere ka anyị na-edozi nke ọma. 24 Anyị anaghị edozi ndị nke dị mma n’anya otú ahụ. Ma, Chineke jikọtara ahụ́ ọnụ, meekwa ka a na-edozi ndị nke na-adịchaghị mma n’anya karịa otú e si edozi ndị ọzọ. 25 O mere ya otú a ka ihe dị iche iche dị n’ahụ́ ghara ịna-emegide ibe ha, kama ka ha niile na-enyerịtara ibe ha aka.+ 26 Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ndị dị n’ahụ́ na-ata ahụhụ, ndị nke ọzọ niile na-eso ya ata ahụhụ.+ Ọ bụrụkwa na e too otu n’ime ihe ndị dị n’ahụ́, ndị nke ọzọ niile na-eso ya aṅụrị ọṅụ.+ 27 Unu bụ ahụ́ Kraịst,+ onye ọ bụla n’ime unu sokwa bụrụ ahụ́ ya.+ 28 Chineke enyekwala ndị dị iche iche ọrụ ha ga na-arụ n’ọgbakọ. Nke mbụ, e nwere ndịozi.+ E nwekwara ndị amụma,+ nwee ndị na-akụzi ihe,+ nwee ndị na-arụ ọrụ ebube,+ nwee ndị na-agwọ ọrịa,+ nwee ndị na-enyere ndị ọzọ aka, nwee ndị na-eduzi ihe,+ nweekwa ndị na-asụ asụsụ dị iche iche.+ 29 Ọ̀ bụ ha niile bụ ndịozi? Ọ̀ bụ ha niile bụ ndị amụma? Ọ̀ bụ ha niile na-akụzi ihe? Ọ̀ bụ ha niile na-arụ ọrụ ebube? 30 Ọ̀ bụ ha niile nwere ike ịgwọ ọrịa? Ọ̀ bụ ha niile na-asụ asụsụ dị iche iche?+ Ọ̀ bụ ha niile bụ ndị nsụgharị?+ 31 Ma na-agbasinụ mbọ ike* ka unu nweta onyinye ka mma.+ Ma, m ga-egosi unu ihe kacha ihe ndị ọzọ niile mma.+
^ Na Grik, “Unu ma na mgbe unu bụ ndị mba ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “jirinụ ịnụ ọkụ n’obi na-achọ.”